Kabtanka kooxda chelsea Cesar Azpilicueta ayaa markii ugu horaysay shaqada ka caydhiyay tababarihiisii ​​shaqada laga caydhiyay ee Frank Lampard isaga oo shaaca ka qaaday dhibaatada kooxda haysata wakhtigaas iyo cayrintii Thomas Tuchel.
Hordhac: Atletico Madrid vs Real Madrid – Kulan
Chelsea ayaa dhibaato ku jirtay bishii January waxayna ku dhamaysatay kaalinta sagaalaad ee kala sarreynta horyaalka, laakiin markii la ceyriyay kooxda waxay dib ugu laabatay wadada guusha Isniintii ayay barbaro la gashay kooxda Wolves Arbacadii ka hor inta aysan sii wadin inay guuleysato shan iyo barbaro.
Kabtanka kooxda Cesar Azpilicueta ayaa wareysi uu siiyay wargeys kasoo baxa dalka Spain wuxuu ku yiri: “Jawiga kooxda wuu fiicnaaday wax walbana way isbadaleen”.
Cesar Azpilicueta, oo isku diyaarinaya kulanka kooxdiisa ay wajaheyso Atletico Madrid habeenka talaadada ayaa yiri: “Lix isbuuc ka hor kuma aanan fiicneyn boos fiican. Hadda Tuchel ayaa ku lug leh, wax walba waan horumarinay. Niyadda kooxda waa wanaagsan tahay. “Inkasta oo aanaan waxba ka qaban karin Premier League (si aan u qabsanno Man City), waa war wanaagsan inaan gaarno Champions League.”
Wuxuu sidoo kale sheegay in kooxdiisu ay si buuxda uga soo kabatay dhibaatadii waqtigaas jirtay wuxuuna yidhi: “Isku duubnidii way soo kabatay, fursado yar ayaa la damaanad qaaday waxayna ka hadlaysaa shaqada wadajirka ah ee kooxda, min weerar ilaa difaac. Tababaraha cusub, waxaan isku dayeynaa inaan xakameyno ciyaarta marka aan kubada heysano iyo markaan laheyn. “
Tababarihii shaqada laga ceyriyay Frank Lampard wuxuu ahaa mid fudud: “Natiijooyinkayagu ma aysan fiicneyn. Frank wuxuu ahaa ciyaaryahan kubad cajaa’ib leh, nasiib ayaan kulahaa inaan la wadaago qolka labiska ka dibna wuu i tababaray, laakiin waxaa iska leh Roman Abramovich iyo maamulka kooxda. beddel. “